Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday goobtii uu ka dhacay qaraxii Shalay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
October 15(FMN)-Madaxweynaha soomaaliya mudane;Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa saaka booqday goobtii uu shalay ka dhacay qaraxii ay dadka badan ku halaagsameen ee lala beegsaday agagaarka hotel safari ee isgoyska Km5 ee magaalada Muqdisho.Madaxweynaha oo ay wehliyaan xubno kamid ah mas’uuliyiinta dawlada ayaa kormeer ku tagay goobta isagoo dadka ugu baaqay in ay gar-gaar caafimaad ufidiyaan dhibanayaasha halkaasi ku waxyeeloobay.
War qoraal ah oo uusoo dhigay bartiisa faceboog-ga ayuu ku faah-faahiyay booqashadiisa waxuuna yidhi”,Waxaan saaka tagay goobtii ay musiibadu kadhacday iyo Isbitaalka Erdogan oo ay dhaawacyo badan yaallaan.Waxaan farayaa cid waliba oo leh aqoon caafimaad in ay gaarto goobaha caafimaadka si loo caawiyo dadka dhaawacyada qaba.Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in laga qeybqaato hawlaha gurmadka ee haatan socda.”
Madaxweynaha Soomaaliya oo dhiig ushubaya shacabkii ku dhaawacmay qaraxii Zoobe.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale booqday Cusbitaalka lagu dabiibayo dadkii ay dhaawacyadu soo gaadheen ,isagoo ku biiray dadkii dhiigooda ushubayay dhaawacyada goobta yaala.Dawlada Soomaaliya ayaa iclaamisay muddo 3 maalmood ah oo baroor diiq qaran loo sameeynayo dadkii la laayay,iyadoo amartay in calanka soomaaliya hoos loo dhigo inta lagu jiro baroordiiqdaas.
Qaraxa shalay ayaa ahaay mid ku cusub magaalada muqdisho oo aan hore noociisa oo kale loo arag,waxaana loo adeegsaday qaari xammuul ah oo lagusoo shixnaday waxyaabaha qarxa.Ilaa iyo haatan si dhab ah looma xaqiijin karo tirada rasmiga ah ee dhimasho ama dhaawac ahiyo khasaaraha maaliyadeed ee dadka soo gaadhay.Waxii warar ah ee kusoo kordha arintan dib ayaan idinkaga soo tebin doonaa inshaa allaahu.
Previous Previous post: Wararkii ugu dambeeyay ee Qaraxii Zoobe iyo Ciidamada oo qabtay nin waday gaari ku qarxay Wadajir.
Next Next post: Ra’iisul Wasaaraha oo ka baaqday booqasho rasmi ah oo uu ku tagi lahaa Dalka Turkiga.